UMGANGATHO WOQALO (IINKONZO KUNYE NEENGOZI) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Umgangatho woqalo (Iinkonzo kunye neengozi)
Ngaba i-bamboo flooring iyona khetho efanelekileyo kwiprojekthi yakho elandelayo yokulungisa ikhaya? I-bamboo ihlala ithathwa njengoyilo lwangaphakathi kukhetho oluthandayo lomgangatho, njengoko yeyona ndlela ilungileyo kuyo wokhuni oluqinileyo ngenxa yezibonelelo zayo ezininzi kunye nokubonakala okungaqhelekanga. I-bamboo yinto enye eguquguqukayo enokusebenza ngeenjongo ezininzi. Apha ngezantsi siza kugubungela ezinye zezona zizathu zibalulekileyo zokusebenzisa i-bamboo flooring kubandakanya i-pros and cons for use in your home.
Yintoni i-Bamboo Hardwood Flooring?
Iinkonzo zeMigangatho yoqalo
Umqadi woMgangatho woBambo
Iindidi zeMigangatho yoqalo
Umgangatho weBamboo oyile
Loluphi uhlobo loMgangatho weBamboo olundilungeleyo?
Ngaba i-Bamboo Flooring ayinamanzi?
Umgangatho woqalo kunye neenja
Uqalo lwe-bamboo luhlobo lwesityalo esihlala siluhlaza esingoyena luhlobo lukhulu lwengca, noluhlu olwahlukileyo lweentlobo ezahlukeneyo. Ukwenziwa kwe-bamboo eyenziwe ngomthi onzima kukhokelela ekuqothulweni kwemicu emincinci yengca ukuze ifudunyezwe phantsi koxinzelelo kwaye incamatheliswe ngokufanelekileyo ukwenza ibhodi eyenziwe ngomthi ngoqalo.
yeyiphi na iringi yomtshato eqhubekayo
Iintambo zoqalo zinokusikwa zibe yimicu emininzi ukuze ilaminishwe ukuze yenze umaleko weplanga. Okanye inwebu encinci yoqalo inokulaminishwa kwiplywood. Okanye, uqalo olukiweyo lusisiphumo sokuxuba imisonto ekufuneka itshixiwe kunye. Olu luhlobo lwe-bamboo hardwood flooring ongakhetha kuzo onokukhetha uhlobo lwakho lomgangatho ngokuxhomekeke kwiimfuno.
Eco Friendly - Umgangatho we-bamboo yinto ebonakalayo enokusetyenziselwa iinjongo zokwakha. Izinto ezinobuhlobo ze-Eco ezinje ngoqalo lukhetho kuninzi ngenxa yokubonakala kwayo kubuhle ukuze ulungele amakhaya anamhlanje. Umgangatho we-bamboo wendalo sisixhobo esinokuphinda sihlaziyeke esikhula ngokukhawuleza endle kwaye sifunwa kakhulu ngabo bafuna ikhaya eliluhlaza.
Ubuhle -Umbonakalo obalaseleyo womgangatho unokufezekiswa ngokulula ngokufaka umgangatho we-bamboo. Ukusebenza ngokungafaniyo kwee-shades, amandla adityaniswa ekugxininiseni isiphumo somgangatho wonke. Ukuba ufuna iithowuni ezimnyama zoqalo, uqalo lwekhabhoni lubonakala njengesisombululo esifanelekileyo. Xa i-bamboo ifakwa kwikhabhoni, ukutyibilika komhlaba kuthamba ngakumbi kwaye kujike kube mnyama.
Ukuxhathisa kwamanzi - Ukumelana ne-Bamboo emanzini kulula kakhulu. Ulungelelwaniso lomgangatho woqalo njengelifa ekumelaneni namanzi sisibonelelo esongeziweyo. Oku kushiya abaninikhaya bekwazi ukufaka i-bamboo flooring naphina endlwini (ngaphandle kwegumbi lokuhlamba) ngaphandle kokusebenza.
Igqityiwe -Ubuhle bemigangatho yoqalo bukhokelela ekukwazini ukuphinda ubambe kwakhona kwaye ubuphucule. Kuyacetyiswa ukuba isanti xa i-bamboo flooring iqala ukunxiba nokuphazamiseka. Ukhetho lokuphinda ubambe kwakhona ekwenzeni ukuba u-bamboo ubonakale uhloniphekile kunye nokuhamba kwexesha.
Kulula ukucoceka -Ukuba ukucoca kuvakala ngathi yeyona ngxaki inkulu kuwe, i-bamboo flooring yenza kube lula kuwe. Ukufakwa kwe-bamboo kunokubangela inkqubo elula yokucoca amaxesha ngamaxesha. Ukutshayela okanye ukucoca nje kuya kwenza okwaneleyo kumgangatho we-bamboo. Ngapha koko, kuyacetyiswa ukuba ungamanzi umpop kuba imigangatho yoqalo iya kuba madolw 'anzima ukufuma. Kodwa ukuba ukhetha ukugqibezela kodwa uhleli ixesha elide, i-bamboo sisisombululo esifanelekileyo.
Intabalala Yintoni epholileyo ngoqalo bubuninzi bezinto eziphathekayo. Oku kukhokelela ekongeni iintlobo ezingaqhelekanga zomthi onzima kungenjalo kufuneka zinqunyiwe ngenxa yeemfuno zabantu ezahlukeneyo. Kwaye, ngokungafaniyo nolunye ukhuni, i-bamboo ayithathi xesha lide ukukhula. Esi sesinye sezizathu eziphambili zobuninzi bezinto xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zomthi onzima ezifanayo ezithatha amashumi eminyaka ukukhula.
Ukungafani - Kubalulekile ukuba uqaphele ukomelela koqalo ngokuxhomekeke kwiimpawu zayo zokuvelisa. Ngokomzekelo, i-bamboo carbonated flooring ingabangela ubomi obufutshane kodwa iqulethe umthunzi ocebileyo. Kwelinye icala iintlobo ze-bamboo ephothiweyo kunye ne-bamboo eyenziwe nge-bamboo engasebenziyo inokusebenza ixesha elide kunye nokuqina. Imigangatho ye-bamboo, ukuba neempawu zayo ezizodwa kudala i-vibe yoyilo olucocekileyo nenhle ukulungela uhlobo lwemfuno.
Iindleko -I-bamboo ifikeleleka kakhulu ukuyifaka iyenza ukhetho olukhulu kwiiprojekthi zohlaziyo lwasekhaya. Iindleko zoqalo lwe-bamboo zihlala ukusuka kwi-2 ukuya kwi-4 yeedola ngeenyawo ngokuxhomekeke kubukhulu, umbala kunye nohlobo, kunye nokuma kwe-bamboo kokona kuzinzileyo. Ngokubanzi Ixabiso lomgangatho wokhuni oluqinileyo ibiza kakhulu ngeerandi ezimbalwa ngonyawo wesikwere.
Indawo ezifumileyo / ezomileyo Nangona kunjalo, uqalo luneengxaki zalo. Ngokomzekelo, i-bamboo isengozini kwiindawo ezinomswakama okanye kwiindawo ezinomileyo ezinokubangela ukuba i-bamboo flooring iyancipha. Kuba iimeko ezifumileyo ziqulathe ukufuma komoya okugqithileyo, oku kukhokelela kudumba lweplanga loqalo. Ke kubalulekile ngokulinganayo ukuba wazi imeko yokusingqongileyo ngaphambi kofakelo.
Ukuba sesichengeni samanzi - Nangona sidwelise i-bamboo njengenye yeentlobo zeenkuni ezingcono zokumelana namanzi njengazo zonke iintlobo zeenkuni ezisengozini yokufuma. Njengomgangatho owenziwe ngoqalo kunokuba ngathi lolona khetho lufanelekileyo, kubalulekile ukuba ubazi ubungozi bayo. Olu hlobo lophahla alucetyiswa ukuba lufakelwe kwiindawo ezinamanzi okanye kwiindawo ezithandwa kukuvuza kwamanzi. Nangona i-bamboo ingazukubonisa iziphumo zayo ezikhawulezileyo, ekuhambeni kwexesha ukubhengeza kolu hlobo lwendalo kuya kukhokelela kubomi obufutshane bomgangatho we-bamboo.
Inkqubo yokuThengisa - Inkqubo yokwenza i-bamboo isebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zeekhemikhali kuba imathiriyeli ifuna iintlobo ezahlukeneyo zeekhemikhali ukuba zincanyathiselwe kunye. Kukwabalulekile ngokulinganayo ukuba wazi ngenkqubo yokuvelisa njengoko inkqubo inokuba ngumzobo omncinci ngakumbi kuxhomekeke kukuthembeka okanye imigaqo yokuziphatha yenkampani okanye uphawu.
Xa i-bamboo ingeyiyo bamboo? Xa isemgangathweni wakho. Ngokwesiqhelo sicinga ngoqalo njengoluhlobo lweenkuni, kodwa ke yingca enengcongolo. Okwangoku, ijongeka ngathi, iyaziva, kwaye iyasika njengokhuni ukuze siyiphathe okomthi xa siyisebenzisa ukwenza umgangatho. Ukwazi iintlobo ezahlukeneyo zomgangatho woqalo ngaphambi kwexesha kuyakwenza ukuba uhambo lwakho lokubonisa kwigumbi elikhawulezayo nelingenabuhlungu.
Umgangatho oqinileyo we-Bamboo Floor uyafumaneka ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. Ukutya okuziinkozo okuthe nkqo kwenziwa kwimicu yoqalo ebekwe emiphethweni yayo kwaye yadityaniswa. Uyalubona olu hlobo lokwakha kwiindawo zokuphambela. Jonga imizekelo imiphezulu yeetafile bamboo Apha.
Umqolo oqinileyo osisicaba yeyona nto uyibonayo kwisebe leemigangatho yevenkile zakho eziphambili zokuphucula ikhaya. Inemigca eqingqiweyo, imicwe eqingqiweyo yoqalo edityaniswe ngokudibeneyo. I-bamboo yaseStrand yenziwa xa umxube we-resin kunye ne-bamboo ecekeceke kwaye ucinezele kwiiplanga ezinzima. Ezi ntlobo zoqalo zihlala zifumaneka ngolwimi kunye neeplanga zomthi, njengomgangatho wokhuni oluqinileyo, kwaye zifakwe ngendlela efanayo nomgangatho okhuni. Into emnandi malunga nolu hlobo lophahla kukuba luza kugqitywa kwangaphambili, ke xa ufakelo lwenziwe, ungawusebenzisa umgangatho wakho.
izipho zokubandakanya umhlobo wakho osenyongweni
Umgangatho we-Bamboo wobunjineli ufumaneka ngokusetyenziswa kwendlela yaseStrand yokuxuba ii-resins kunye ne-bamboo eyenziweyo. Umahluko omkhulu phakathi koku kunye nomgangatho oqinileyo yindlela yokufaka. Umgangatho we-bamboo wobunjineli ufakwe njengomgangatho odadayo, oko kuthetha ukuba ubekwe ngaphezulu kwesiseko se-foam-yerabha kwaye awuncanyathiswanga kumgangatho ongezantsi. Enye yeenzuzo eziphambili zoku kukuba ukufakela kulula kakhulu, kuyakhawuleza, kwaye kutshiphu kunokufakwa uqalo oluqinileyo.
Ubunjineli bemigangatho yobunjineli bubukeka buhle kwigumbi lokuhlala, kwigumbi lokulala, kwigumbi lokutyela okanye ekhitshini. Unokufunda ngakumbi malunga neentlobo ze umthi onzima owenziwe ngobunjineli ekhitshini Apha.
Luluphi ukhetho olulungele wena kuxhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali, iimfuno zakho, kwaye zeziphi iintlobo zeemfuno eziza kwenziwa kumgangatho wakho. Ukuba uhlala kwindawo enomswakama, unokufuna ukuqaphela i-bamboo eqinileyo njengoko kunokunyamezeleka ngakumbi kutshintsho lomswakama kunenjineli. Umgangatho oqinileyo we-bamboo uhlala ubiza kancinci kunokuba ubunjineli kodwa iindleko zokufaka ziqina ngakumbi. Ixabiso alisoloko linyanzelisa umgangatho xa kuziwa kumgangatho wokhuni, ngoko jonga iwaranti. Iwaranti ende, ebandakanya ngakumbi sisalathiso esihle sokuba ujonge imveliso esemgangathweni ngaphandle kwendleko zokuqala.
Okokugqibela, i-bamboo inokukhanya okufudumeleyo, okufudumeleyo kwaye sihlala sibona ithambile, iitoni ezenziwe ngeplanga eziboniswe kwiishelufa zevenkile kodwa i-bamboo iyafumaneka kumabala angaphezu kwama-50, ukusuka kwiitoni eziqaqambileyo ukuya kwezithambileyo, ikunika iindlela ezininzi onokukhetha kuzo. Kwakungekho kudala kakhulu ukuba iimagazini zoyilo ziqwalasele i-bamboo umkhwa. Kodwa oku kuyonga kwaye Umgangatho we-eco-friendly ibonakalisile ukuba ilapha ukuhlala.
Njengokufikelelekayo, kulula ukuyigcina enye endaweni yomthi onzima, i-bamboo ngoku lukhetho oluphezulu lwabayili kunye neemagazini zoyilo. Nokuba ungayibeka phi ekhayeni lakho okanye zingaphi izigaba zoyilo ohamba kuzo, uqalo luya kubakho, ukubonelela ngasemva okuhle kuzo zonke iimfuno zakho zoyilo.
Umgangatho we-bamboo uyamelana kakuhle namanzi kodwa oko akuthethi ukuba akunakungena manzi. I-bamboo flooring inezinto ezizodwa zokuchasana kwamanzi ngokungafaniyo nezinye iindlela zomthi onzima. Ukuba ushiya isiziba samanzi ukuba simanziswe phantsi ngaphezulu kwexesha, kulapho ke umhlaba uya kuqala ukusabela ukudumba okanye ukugqwetha. Ngaphandle koko, lo mgangatho ngokuqwalaselwa ngononophelo lokuchitheka unokufakwa ngempumelelo kwiipaneli okanye ekhitshini.
Ukuqaphela, iindlela ezikhethekileyo zokuluka zikhokelela ekomeleleni nasekuzinzeni kweendidi zephantsi yomthi echaphazela ukumelana namanzi. Iindidi ezithile ezinje ngomgangatho owenziwe ngomthi woqalo zinokusebenza ngokuthembakeleyo kunasezingeni eliphakathi. Umgangatho owenziwe ngoqalo kungenzeka ukuba ungachaphazeleki kangako, ukuba uvezwe emanzini. Kubaluleke ngokulinganayo ukuba sazi ngokusingqongileyo ukuba kuya kufakwa i-flooring. Umzekelo, kuyacetyiswa ukuba kufakwe i-bamboo kwiindawo apho ukufuma kungatshintshi ngaphezu kweedigri ezili-15. Kuba ayinangxinano efanayo ukushukuma okubanzi kokufuma kunokubangela ukuba shrinkage yenzeke kwezinye iimeko.
Ngaphezu kwako konke, i-bamboo flooring inokufakwa naphi na ngaphandle kwegumbi lokuhlambela. Nokuba kusekhitshini okanye kwi-bamboo flooring kunokuba luncedo olukhulu ukuba igcinwe ngokufanelekileyo. Isiseko se-bamboo flooring sinazo ezinye iintlobo zomthi onzima ezifana nesibheno esicocekileyo kunye nobuhle esikhokelela ekukhanyiseni indawo nangakumbi. Nokuba i-bamboo flooring ayibobungqina bamanzi, ngokuqinisekileyo iintlobo ezinje ngoqalo olukiweyo zingumnini wokumelana namanzi, ngaphezulu kakhulu koogxa bayo okanye ezinye iintlobo zemigangatho elukhuni.
Kwindlu enobubele yesilwanyana sasekhaya, i-bamboo flooring iza kuluncedo ngokwenene ukugcina zombini isilwanyana sakho kunye nendlu. Nangona uqalo lungenguwo umthi okhuni, lwabelana ngokufana komthi okhuni. Uqalo lubandakanyiwe kuvavanyo lobulukhuni lweJanka oluchaziweyo ukumisela ubunzima beentlobo zeenkuni. Kuyavunyelwana ngokubanzi ukuba kunzima kangakanani ukuba ngumthi, kokukhona imikrwelo incipha kuyo nayiphi na imeko.
Nokuba kunjalo, iyaqondakala indlu enobuhlobo yezilwanyana ingakumbi izinja, imikrwelo inokuba yinto encinci exhaphakileyo yengxaki. Ngokungafaniyo neentlobo ezininzi zomthi onzima ngaphandle apho zithande ukukrwela, olu hlobo lophahla lunokubangela ukuba kubonakale ngathi kuncinci ukukrweleka ngokubanzi.
Ngokufanelekileyo, phakathi kweentlobo ezininzi, i-strand-woven bamboo flooring yenye yezinto ezinamandla zomgangatho we-bamboo sisisombululo esifanelekileyo kwisilwanyana esinomgangatho onokukhetha kuwo.
Umgangatho we-bamboo ulungele izilwanyana zasekhaya malunga nezizathu zempilo zokuba ayiqokeleli uthuli ngokungafaniyo neekhaphethi. Ukukhululeka kwenkqubo yokucoca sesinye isizathu esisebenzayo sokubalwa. Olunye uqalo luza nenkqubo eyongezelelweyo ye-anti-slip lacquer eyenza kube lula kwizilwanyana ukuba zihambe ngokukhululekileyo njengoko i-flooring isiba buthathaka. Ukongeza, ukuhlala ixesha elide, kunye nokuqonda okuluhlaza kunye ne-aesthetics ecocekileyo zidityanisiwe kumgangatho woqalo owenza uninzi lwabanini bezilwanyana baneliseke ziziphumo zokugqibela.
Ukufumana ezinye izimvo ndwendwela iphepha lethu kwi- iintlobo ezahlukeneyo zokomgangatho Apha.
Isinxibo se teal sondwendwe lomtshato
isipho somolokazana ngosuku lomtshato
Isangqa se-opal enedayimane halo
iilokhwe zomtshato zabatshati besibini
Izimvo zesipho sikamama ngosuku lomama